NextMping | Online Courses
musha / Online Courses
Kubatanidza ramangwana rekutsvaga kwebasa pamwe neyakajeka uye nyore kuita maitiro. Yedu yepamhepo kosi sarudzo inosanganisira yekuzvidzidzira poga kudzidza Kana kochi rutsigiro rwebudiriro uye kuita kuzvidavirira.
Unyanzvi Hutsva hunodiwa Nevashandi Kuti Vagadzire
Tiri kurarama uye tichishanda munguva dzisina kumboitika. Denda rakashandura hupenyu uye bhizinesi zvachose. Ungave sei iwe uri pamucheto unotungamira wekuchinja uye kukanganisa mune ino nyowani nyowani? Iyo ramangwana iri kudaidza kuti vanhu pachavo vave nehunyanzvi hwekugadzira uye hunyanzvi kupfuura zvaraimboita.
Iyo ramangwana rekubudirira kwebasa harizotsamire pane rimwe kana maviri 'magamba' mune bhizinesi. Funda kuti sei ramangwana riri pamusoro 'isu' uye maitiro ekugadzira tsika yekuvandudza yakagadzirira shanduko.
Bhuka izvozvi for 50% off
Sei Kudzorera Uye Kuchengeta yepamusoro Tarenda Izvozvi Uye Mune Remangwana Rekushanda
Imwe yenyaya hombe dzakatarisana nemabhizimusi pari zvino kutsvaga kwayo nekuchengeta vanhu vakanaka. Chokwadi ndechekuti nzira dzekare dzekutumira mabasa, hwekuhaya mabasa uye kutarisira kuti vanhu vachanamatira vasingachaita basa.
Kuita Kwaungaita Mutungamiriri Shanduko Inopinza uye Inobatanidza Matimu
Hutungamiri Hweshanduko hwakatarisana nezvinhu zvinoshandurwa mutsika. Iko kune yechinyakare yechina 'Ini's yeTransformative Hutungamiriri yatichazoshandisa nguva pazviri muchirongwa ichi.
Iro Ramangwana rakagovaniswa - Maitiro Ekugadzira Yakagovaniswa Hutungamiri Kunzvimbo Yemabasa Tsika
Kugovana Hutungamiri itsika. Kune zvinangwa zvakagovaniswa, kugovana kuzvidavirira uye kuzivikanwa kugovaniswa Iyo tsika yeagility, hunyanzvi uye kubatana. Funga nezvayo seyakasimudzwa vhezheni yekubatana.
Maitiro Ekutungamira Shanduko yeVS Tungamira Shanduko Kugadzira Iyo Yemberi Yebasa
Chinja hunyanzvi hwehutungamiriri hwakakosha kune iri kure basa uye nekukurumidza kuchinja nzvimbo yebasa.
Maitiro Ekutungamira Mune Ramangwana ReBasa - Uine kana Pasina Musoro
Iyo ramangwana rebasa ikozvino! Iro ramangwana rakagovaniswa uye zvinoda kuti munhu wese avake hunyanzvi hwehutungamiriri zvisinei nemusoro wezita.
Chiitiko chinogoneka Chidzidzo chakasarudzika kune chako pachako pazviitiko zvebasa
Kuwanikwa kwekudzidzira zvishandiso infographics kurodha kosi kupedzisa zvitupa
Kuwana uchishandisa chero mudziyo 24 / 7 365 Mazuva pagore
Yakatemerwa mutengo uye kumberi kwemutsara kunyoresa kweLive NextMping ™ Zviitiko
Kutungamira kudzokorora kukokwa kunyorera ramangwana rinotevera NextMping ™ Zvirongwa
Kuwanikwa kwePamusoro Musoro Webinars Podcasts uye chero zviitiko zvepa online
Kuwanika kune yedu yepasi rese yenyanzvi Bvunzurudzo uye zvipo zvavo zvinoshamisa
Yepachena kopi yeBook, "Hutungamiri Hutungamiriri mune yeDhijitari Age"
Kusakwaniswa kwemiganhu kune zvese zviripo uye zvitsva zvemukati zve6 mwedzi!
Mahara Course Zvinyorwa
Yako Yega Nyanzvi Kochi Kesi yakasarudzwa uye yakagoverwa kune yako kosi nguva
3 Yakasarudzika Imwe Yemaawa Ekudzidzisa inoshevedza mukati mekosi imwe neimwe
Yakasarudzika pabasa rekushandisa zvirimo; makochi anokurukura mamiriro ako akasarudzika
Kutungamira kunyoresa kune edu matsva epamhepo kosi pane ramangwana rebasa
Kuwanika weblinks bhuku rinokurudzira nyanzvi zvemukati uye nezvimwe
"Ndakaona ichi chave chirongwa chikuru kune vanhu chero vapi pamwero wesangano, vasingagone kune avo vari munzvimbo yehutungamiriri hwechinyakare."
B. Wilkins, OmniTel Kutaurirana
Tenga makosi ezvikwata zvako kana kambani
Kana iwe uchida kugovera online kudzidziswa kuwana kune yakazara timu ye20 kana kupfuura kana iwe uchida kutaura nezve chena kunyora zvidzidzo zvedu kune kambani yako
Isu tichafara kutaura newe nezvemitengo yakasarudzika.
Bata nesu nezvemitengo
Iva padanho rinotungamira
Inokurudzira, inopa ruzivo, inofambidzana uye yakagadziriswa kune zvako zvakasiyana nezvinodiwa.
Imwe-pane-imwe inotaridzika yekudzidzira kukurumidza kuendesa mberi hunyanzvi hwako.
Strategic ruzivo uye kutsvagisa kukwidziridza bhizinesi rako.
Kudzidziswa kwakagadzirirwa kukwidziridza hunyanzvi hunodiwa nevatungamiriri vako uye zvikwata.